Home Health & Beauty ကလေးမလိုချင်သေးသူများအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် နှင့် သန္ဓေတားနည်းအမျိုးမျိုး
သားဆက်ခြားဖို့အတွက်က အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုရေး၊ စီးပွားရေး လူမှုရေး စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် အိမ်ထောင်သည်တွေရာ စုံတွဲတွေရာက ဒီကိ စ္စကို တော်တော် အလေးအနက်ထားလာကြပါတယ်။
ပူပူနွေးနွေးလည်း လက်ထပ်ထားတယ်၊သူတို့လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မရောက်မချင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တဲ့အခါ သူတို့ဟာ ကလေးမမွေးအောင်လုပ်မယ့်နည်းကို စဉ်းစားလာကြပါတယ်။
သားဆက်ခြားဖို့အတွက် စဉ်းစားစရာအချက်အလက်များစွာရှိပါတယ်။ သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် သန္ဓေတားဆေးအမျိုးအစားကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ? ကလေးထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ငယ်လည်းငယ်သေး အလှပျ က်မှာလည်း စိုးရိမ်တဲ့ သူတွေက ဘယ်လိုနည်းကို ရွေးချယ်ရမှန်းမသိကြပါဘူး။ ဒီတော့အောက်မှာဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့သုံ းနိုင်လဲဆိုတာမျှ၀ေပေးလိုက်ပါတယ်။
သားဆက်ခြားနည်းတွေမှာ ကာလတိုနည်းနဲ့ ကာလရှည်နည်းဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ လပိုင်းလောက်၊ နှစ်အနည်းငယ်လောက်ပဲ တားထားမယ်ဆို ကွန်ဒုံး၊ ဆေးကတ်နဲ့ ထိုးဆေးတွေ သုံးလို့ရတယ်။ နှစ်ရှည်တားထားချင်တာဆို သားအိမ်၊ လက်မောင်းထဲထည့်တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ သားအိမ်ထဲထည့်တာက ကလေးတစ်ခါမှ မမွေးဖူးသေးရင် ထည့်လို့မရဘူး ပြောကြပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းမှာ ထည့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောလာကြတာမို့ သုံးမယ်ဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဟော်မုန်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို စဉ်းစားပါ
ဟော်မုန်းပါတဲ့နည်းတွေသုံးရင် ဟော်မုန်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေကို ခံစားရတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းမူးတာ၊ ပျို့အန်တာတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် အပြောင်းအလဲဖြစ်တာ၊ အသားအရေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာက ကျိန်းသေဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောမရပါဘူး၊ မဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
နောက်၀တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်း ဒီဆေးတွေကြောင့်ဝတယ်ဆိုတာထက် အသက်အရွယ်နဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကြောင့်လည်း အများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် အစားရှောင်ရင် ဝတာကို ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်နော်။
သားဆက်ခြားနည်းတစ်ခုကို ရွေးတော့မယ်ဆို အဓိက စဉ်းစားရမှာက ဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နှနှစ်တားချင်တာလဲ၊ ဟော်မုန်းပါတာဆို အဆင်ပြေမလား။ ဟော်မုန်းမပါတာကပိုသင့်တော်မလားပေါ့။
တချို့အမျိုးသမီးတွေက ရာသီပေါမှ မိန်းမဆန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကွန်ဒုံးနဲ့သားအိမ်ထဲထည့်တဲ့နည်း သုံးတာအကောင်းဆုံးပါ။ ရာသီမပေါ်လည်း ပြဿနာမရှိဘူး၊ Okတယ်ဆို ၃လခံထိုးဆေးနဲ့ လက်မောင်းတွင်းထည့်ပစ္စည်းကတော့ ရာသီမပေါ်တာများပါတယ်။ ကိုယ်ဘာနဲ့သင့်တော်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
သင်ကကိုယ်၀န်တားထားတယ်ဆိုပေမယ့် ကလေးချက်ချင်းပြန်လိုချင်တာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ တားမယ့်နည်းကို သေချာရွေးရပါမယ်။ သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်နိုင်မလား? ကွန်ဒုံးပဲသုံးမလား? ဒါမှမဟုတ် ၃လခံဆေးထိုးမလား? ၃လခံဆေးကတော့ ကိုယ်၀န်ချက်ချင်းပြန်မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လုံးဝကြီး မရတာမျိုးတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်နည်းနည်းစောင့်ရတတ်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က သားသမီးရှိပြီးပြီလား မရှိရသေးဘူးလား တွက်ပြီး သုံးသင့်ပါတယ်။ ကလေးမယူရသေးတဲ့သူတွေကတော့ ၃လခံဆေး အစား တခြားနည်းတစ်ခုခုသုံးတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်တားတာက အမျိုးသမီးအတွက်ဆိုပေမယ့် အမျိုးသားအတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။ တချို့အမျိုးသားတွေက သားအိမ်ထဲထည့်တာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ ကွန်ဒုံးသုံးမလား ဘာနည်းလမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ဆီသွားရင် သူ့ကိုပါ ခေါ်သွားပါ။ တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်ကြပါ။
ကိုယ်ဝန်မရအောင်လို့ တချို့ကလည်း ရက်ရှောင်နည်းကို သုံးကြပါတယ်။ ဒါက သိပ်တော့ မကျိန်းသေပေမယ့် တချို့တွေကတော့ သုံးကြပါတယ်။ ဒီနည်းက ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ ပိုများတယ်ဆိုတာတွက်ချက်ပြီး အဲ့ဒီရက်တွေကို ရှောင်ပြီး အတူနေကြတာကို ဆိုလိုတာပါ။ သိပ်တော့မသေချာတဲ့နည်းလမ်းပါ။
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမှာလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့နဲ့တစ်သမတ် တည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်သောသန္ဓေတားနည်းသည်သင့်တစ်သက်တာမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်လို့အောက်ကအချက်တွေကို စဉ်းစားပါ
အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအရေအတွက်၊ သင်၏လိင်နှင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးမှုအကြိမ်မည်မျှအပါအ၀င်ဆက်ဆံရေးအချက်များ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ၄ င်းတို့လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောကူးစက်ရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒီတော့ သားဆက်ခြားနည်းတစ်ခု သုံးတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့က သင့်တော်သလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်နို င်ဖို့အတွက် အဆင့်ဆင့်စဉ်းစားသင့်တာလေးတွေသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် သားဆက်ခြားနည်းကိုရွေးချယ်နိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Previous articleကြံကြံခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါတဲ့ နည်းလမ်း (၉)ခု